Tranga pesta 256 no voamarina teto Antananarivo nanomboka ny volana Aogositra 2017 - Book News
Tranga pesta 256 no voamarina teto Antananarivo nanomboka ny volana Aogositra 2017
Published by Book News on October 12, 2017
Ny 1 Aogositra ka hatramin’izao, trangana pesta 256 no voamarina sy nahazo fitsaboana tao amin’ny Hopitaly Ambohimiandra, araka ny loharanom-baovao. Amin’izao fotoana izao, mikarakara marary 50 ny hopitaly. Androany, nanome fitaovana ny vadin’ny Filoham-pirenena,fanafody, sy fitaovana, ho an’ny hopitaly ao Ambohimiandra sy Befelatanana.
Galana Madagascar- Hetsika fizarana « Gel Hydroalcoolique » maimaim-poana ho an’ny fiara fitateram-bahoaka
Mitohy hatrany ny hetsika ataon’ny orinasa GALANA Madagascar hiarovana ny mpitatitra sy ireo mpandeha! Ny faha 18 sy 31 May 2020 dia hisitraka ny fizarana « gel hydroalcoolique » maimaim-poana ireo fira fitateram-bahoaka rehetra manjifa eny amin’ny Read more…
**(lahatsoratra nosoratana tamin’ny omaly alina tamin’ny 11 ora) Hita fa niha-niparitaka hatrany ny tsimokaretina Covid-19 ary efa mitombo isa ireo firenena mandray fepetra hentitra amin’ny fihiboana. Toa lasa haolo tanteraka ireo tànana anisan’ny naresaka indrindra Read more…
Andeha hiatrika ny COVID-19 am-pitoniana!
Nandritra izay herinandro maromaro izay dia somary voakorontana ny andavanandron’ny tsirairay. Ny antony dia noho ny « Coronavirus ». Raha hiresaka momba azy io aho dia aleoko mampiasa ny hoe COVID-19 satria ilay anarany toa tena vao Read more…